INgqungquthela yaseMbindi yaseMelika ye-ESRI-Geofumadas
Epreli, 2008 ArcGIS-ESRI
Ifike isimemo ezisebenzisekayo kwinkomfa ESRI for kuMbindi Merika, kule meko iya kubanjelwa e Tegucigalpa, Honduras i 21 22 kunye 2008 May.
Kodwa kungekhona nje kuphela ukuba kubekho inkomfa, kodwa YoLawulo loNjineli, Owona ngomzi ESRI e Honduras, kuya kuba abafundisa isifundo ezizodwa kuqeqesho GIS phambi nasemva le nkomfa iya kufundiswa yi ESRI ngabasebenzi engqiniweyo kunye Envi.
12 kunye ne13 de Mayo Ulawulo lwekhwalithi yolwazi
14, 15 kunye ne16 de Mayo Imveliso yedatha kunye noshicilelo
18, 19 kunye ne20 de Mayo Uhlalutyo oluphambili nge-ArcGIS kunye ne-ENVI Workshop
21 kunye ne22 de Mayo Inkomfa yase-Central America ye-ESRI
23 kunye ne24 de Mayo Ukudala kunye nohlobo lwezakhiwo
Kuza kubakho imiboniso ye-ESRI ne-Trimble, iGeEEye kunye ne-Envi, ngaphandle kokubonisa amathoyizi abo amashishini aza kuthatha inxaxheba ekuqeqesheni naseeseshini.
$ 20 kwinkomfa
$ 100 yoqeqesho (umntu ngamnye, ngosuku)
-pota kunye a kunjalo i-geomatics asinalo ubuchule, kodwa oku mara loLawulo loBunjineli luya kulungele ukutyalomali ekuthengiseni okusisiseko, kuba incwadana isimemo sinomfanekiso ombi kakhulu wekhophi / we-pasteado, imifanekiso yepilkelised, ityhicilelwe itekisi kwizinto ezimbi kwaye akukho nto yomfanekiso wenkampani kwiingqungquthela ezihlanu ... ah! Inqwelo yeyokugqibela ilungile.
Ngayiphi na imeko, iindwendwe ezivela kwamanye amazwe zinokuqhakamshela i-imeyile gpalacios@ingenieriagerencial.com, kuba kwindawo yephikseli yencwadana awukwazi ukufunda kakuhle ulwazi lwehotele.
Post edlulileyo«Edlulileyo Uhlalutyo olulinganisiweyo lwe-GIS Software
Post Next Inkambo yoLawulo lweMhlaba kwiiProjekthi zeeDolophuOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "kwiNgqungquthela yase-Central America ye-ESRI"
Ulungile uGerardo, ukuba abantu baya kutyalomla kwisiganeko esinjengeli-dollar ye-1,000, into ebaluleke kakhulu ukuchitha imali encinane ekuthengiseni ubugcisa.
Le Ncwadana ... ngokwenene imbi kakhulu ... .. =) (Kusuka kwindawo yokujonga, ndithi ...)
Le nto kuthiwa "ngumsindo" okanye umzobo weemoto okanye ingcali ye-GIS uziva namhlanje xa egqobhoza "neocartographer" ...
Kuyinto ngumzekelo omhle nemeko abayili ubomi iminyaka engaphezu 20 eyadlulayo, ndithi, apho ubugcisa / izixhobo sisebenzisa kwaduma zehle kakhulu.
Ngokombono wam, ukuthandwa kwezixhobo, ukongeza kwezi "ntlekele zenzekileyo" ezinje ngale ncwadana "yenzelwe" yinjineli ethile ethandekayo, ilungile. Kufuneka sibone into elungileyo. Okukhona abantu benokufikelela kwezixhobo, kokukhona umhlaba utyebile.
Kwakhona, isixhobo sinjalo nje. Ixabiso elongezelelweyo alikho. Ingcali ye-GIS egcina i sixhobo, ukuba unayo ingcamango yokwenza ukuhlalutya okuthakazelisayo ayinceda kakhulu, kunene?
Uxolo ndishiye isihloko ngawo onke amanqaku .. =)